Dhaqangelinta iyo Talaabooyinka Musalafnimadu waxay Joojisay Go'aankii Madaxweynaha! | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDAQIIQADII MINUTEcoronavirusDhaqangelinta iyo Talaabooyinka Musalafnimadu waxay Joojisay Go'aankii Madaxweynaha!
22 / 03 / 2020 coronavirus, DAQIIQADII MINUTE
Dhaqangelinta iyo Talaabooyinka Musalafnimadu waxay Joojisay Go'aankii Madaxweynaha! : Marka laga reebo dacwadaha fulinta la xiriira tallaabooyinka dayactirka waa la qaadi doonaa iyadoo la raacayo in ay ka gudbaan meesha cudurka sarkhaansan Turkey Corona, Qol oo dhan dacwad dil iyo kicitaan lagu qabtaa guud joojiyay ilaa April 30 2020.
shaqada sii tallaabooyinka loogu talagalay ka hortagga coronavirus ee Turkey. Go'aanno kala duwan ayaa la qaataa si looga hortago in coronavirus-ka uu saameyn xun ku yeesho dhaqaalaha. Sidaas darteed, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu saxiixay wareegto. Iyada oo la raacayo wareegtadan, dhaqan gelinta iyo habsami u socodka dacwadaha ayaa la joojiyay illaa iyo Abriil 30, 2020. Sida ku cad nuxurka wareegtadii uu saxeexay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, talaabooyinka dhaqan galinta ee dib loogu soo celinayo lacagtooda qaaliga ah kuma jiraan.
Go'aanka Joojinta Dhaqangelinta iyo Nidaamyada Musalafnimada
QODOBKA 1- Iyada oo la eegayo baaxadda tallaabooyinka la qaaday si looga hortago faafidda COVID-19 cudurka faafa ee Jamhuuriyadda Dadka iyo u faafidda waddamo badan; Laga soo bilaabo taariikhda la daabacay go'aankan ilaa 30/04/2020, dhammaan fulinta iyo hawlgallada dacwadaha ee la xiriira aruurinta masruufka carruurta, iyo sidoo kale fulinta iyo hawlgallada nidaamka maaliyadeed ee qaabkan lagu fulinayo, iyo fulinta iyo kicinta dacwadaha xaalkan Waxaa la go'aamiyay inaadan qaadin baahiyahooda oo ay fuliyaan una dhaqan geliyaan go'aannada mihiimka ah ee caqligalka ah.
Xaaladaha ay alaabada ama xuquuqaha ay horey u shaaciyeen xafiisyada fulinta iyo kicitaanku ay ku sii nagaadaan taariikhaha joogsiga ee maalinta korodhka, maalinta iibka waxaa la siiyaa alaabtan ama xuquuqaha wixii ka dambeeya 30/04/2020 iyadoon la codsan codsi cusub.
Xaaladdan oo kale, ogeysiiska iibka waxaa lagu sameeyaa oo keliya Nidaamka Macluumaadka Shabakadda Garsoorka Qaranka (UYAP) Hirgelinta Agabka Agabka iibka elektiroonigga ah.
QODOBKA 2- Go'aankani wuxuu dhaqan galaa taariikhda la daabaco.
QODOBKA 3- Wasiirka Caddaaladda ayaa fuliya go'aamada.
Maanta taariikhda: 22 March March 1924 Tareenka Jamhuuriyadda